Politika momba ny tsiambaratelo - Ny tsy fahazoan-dàlana
Nohavaozina farany: 5 Oktobra 2021
Ity politika manokana ity ("Politika momba ny tsiambaratelo") dia mihatra amin'ny tranokalan'ny 100Kin10, tetik'asa tohana ara-bola ao amin'ny Tides Center, orinasam-panjakana iray tsy miankina California ("we," "us", "our"), hita ao amin'ny https: / /100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org, ary https://www.starfishinstitute.org (ireo "Tranonkala").
Zava-dehibe aminay ny fiainanao manokana. Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia mamaritra ny fampahalalana azonay angonina avy aminao na azonao omena rehefa mitsidika ireo tranokala sy ny fanaonay amin'ny fanangonana, fampiasana, fitazomana, fiarovana ary famoahana vaovao. Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia mihatra amin'ny fampahalalana a) azonao omena anay an-tsitrapo rehefa mitsidika ireo tranokala ianao; b) afaka manangona ho azy isika rehefa mitsidika ireo tranokala; sy c) azontsika atao ny manangona amin'ny antoko fahatelo sy loharano hafa.
Azafady vakio ity Politika momba ny fiainana manokana ity alohan'ny hampiasana ny tranokala. Amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny tranokala na ny fanomezana fampahalalana antsika amin'ny alàlan'ny tranokala, dia manaiky ny fepetran'ity Politika momba ny fiainana manokana ity ianao ary koa ny anay. Fepetra sy fepetra fampiasana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy manaiky an'ity Politika momba ny fiainana manokana ity ianao dia tsy tokony hampiasa ny tranokala.
Tsy mila manome fampahalalana momba anao manokana ianao hitsidihana ireo tranokala. Na izany aza, azonay atao ny manangona vaovao avy sy momba ireo mpitsidika ny tranokala. Ity fampahalalana ity dia mety hahafantatra anao manokana toy ny anarana, nomeraon-telefaona adiresy mailaka, adiresy mailaka, demografika, ary fampahalalana mitovy amin'izany ("Fampahalalana manokana"). Manangona ny mombamomba anay sy ny mombamomba anay amin'ny fomba roa izahay: 1) omenao an-tsitrapo anay izany; ary 2) mandeha ho azy rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao.
Fampahalalana omenao anay: Azonao atao ny misafidy ny handefa ny mombamomba anao manokana aminay noho ny antony maro samihafa. Ohatra amin'izany ny: fisoratana anarana amin'ireo mailaka mailaka avy aminay; ny fisoratana anarana hahazoana vaovao momba ny asanay, ny programa, ny fandraisana andraikitra na ny hetsika ataonay; mameno ny "Mifandraisa aminay" na ny taratasy an-tserasera hafa hametrahana fanontaniana na fangatahana fampahalalana; mifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailaka. Raha te hanavao na hamafa ny fampahalalana nomenao anay ianao, mifandraisa azafady info@tides.org ary info@100Kin10.org.
Vaovao voaangona ho azy: Ity sokajy fampahalalana ity dia misy ny adiresy Internet Protocol ("IP") amin'ny solosaina na fitaovana ampiasainao hidirana amin'ny tranokala; ny adiresy Internet an'ny tranonkala izay nampifandraisinao tamin'ny tranokala; ary ireo rohy arahinao avy amin'ny tranokala.
Cookies sy teknolojia mitovy amin'izany: “Ny fampahalalana voaangona ho azy ”dia misy koa ny fampahalalana nangonina tamin'ny alàlan'ny cookies moto na teknolojia fanarahana hafa. Cookies dia rakitra data kely apetraka amin'ny solo-sainanao rehefa mitsidika tranokala iray ianao. Ny cookies dia samy manana ny tanjony, toy ny fanampiana anay hahatakatra ny fomba ampiasana ny tranokalanay, mamela anao hivezivezy eo anelanelan'ny pejy, hahatadidy ny safidinao, ary hanatsara ny traikefa fitetezana anao. Tsy ny cookies ihany no fomba hanarahana ny mpitsidika tranokala iray. Azontsika atao koa ny mampiasa rakitra kely misy sary miaraka amina mpamaritra tokana antsoina hoe fanilo (ary koa "piksel" na "gif mazava") hahafantarana rehefa misy mitsidika ny tranonkalantsika.Amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny toerana mety amin'ny tranokalanay dia afaka misafidy ny tsy hanaiky cookies ianao. Na izany aza, mariho tsara fa raha misafidy io safidy io ianao dia mety tsy afaka miditra amin'ny faritra sasany amin'ny tranokala. Raha mampiasa ny sehatry ny fitetezana izay mamela anao hanaiky cookies ianao dia manaiky ny fampiasanay ny cookies. Fantaro ihany koa fa ny sasany amin'ireo haitao fanaraha-maso tsy cookie dia miankina matetika amin'ny cookies mba hiasa tsara, noho izany ny fanafoanana ny cookies dia mety hanimba ny fiasan'izy ireo. Ny mpikirakira Internet sasany dia mety hamboarina mba handefasana famantarana "Aza manara-maso" amin'ireo serivisy amin'ny Internet izay tsidihinao. Izahay izao dia tsy mamaly "Aza manara-maso" na famantarana hafa. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny "Aza manara-maso," tsidiho azafady http://www.allaboutdnt.com.
Fampahalalana azontsika amin'ny hafa: We Mety hahazo Fampahalalana Manokana momba anao avy amin'ny loharano hafa, ao anatin'izany ny fikambanananao na ny orinasanao, ny hafa izay mieritreritra fa mety liana amin'ny asanay, loharanom-baovao azo ampahibemaso, ary mpanome fanadihadihana antoko fahatelo ianao. Ohatra, mety hahazo ny mombamomba anao manokana izahay raha misy olona ao amin'ny orinasanao manendry anao ho olona hifandraisana amin'io fikambanana io.
Azontsika atao ny mampiasa ny fampahalalana angoninay hanao toy izao:
Mifandraisa aminao, ao anatin'izany ny famaliana ny fanontanianao sy ny fangatahanao.
Miasa, mitazona, mitantana ary manatsara ny tranokala.
Manaova fikarohana sy famakafakana momba ireo mpampiasa ny tranokala sy ny lamina fampiasana.
Mifampiresaha aminao momba ny fanovana ny tranokala na ny politika momba ny tsiambaratelo, raha takianay ny hanaovana izany.
Mamorona angona voangona sy tsy fantatra anarana hafa avy amin'ny mombamomba ireo mpampiasa anay fa tsy mifandray amin'ny fampahalalana manokana izay azonay zaraina amin'ny antoko fahatelo ho an'ny asa aman-draharaha ara-dalàna.
Arovy ireo tranokala, ao anatin'izany ny mamantatra, manadihady ary misoroka ireo hetsika mety hanitsakitsaka ny politikantsika.
Mankato ny lalàna. Azontsika atao ny mampiasa ny mombamomba anao manokana satria mino izahay fa mety a (a) mifanaraka amin'ny lalàna mifandraika amin'izany, ny fangatahana araka ny lalàna ary ny fizotry ny lalàna, toy ny famaliana ny taratasy fiantsoana na ny fangatahana avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta; b) raha avelan'ny lalàna mifandraika amin'ny fanadihadiana ara-dalàna.
Raiso ny fanekenao. Amin'ny tranga sasany dia mety hangataka fanekenao izahay hanangona, hampiasa na hizara ny mombamomba anao amin'ny fomba tsy voarakitr'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity. Amin'ny tranga toy izany, hangataka aminao izahay mba “hifidy” amin'ny fampiasana toy izany.
Fomba entinay mizara ny mombamomba anao manokana
Azonay atao ny mampahafantatra ny mombamomba anao manokana amin'ireo orinasa mifandraika amin'izany toa ny Tides Foundation na ny Tides Network na amin'ireo mpamatsy tolotra antoko fahatelo izay ataonay mba hanampy anay hiasa amin'ireo tranokala sy hitantana ireo hetsika ho anay. Ohatra amin'izany ny fampiantranoana ireo tranokalanay, vavahady na sehatra hafa, serivisy teknolojia fampahalalana, ary fitantanana angona. Raha manana fidirana amin'ny mombamomba anao manokana ireto mpanome tolotra ankolafy fahatelo ireto dia takiana izy ireo hiaro ny tsiambaratelon'ny fampahalalana ary hampiasa izany raha tsy amin'ny tanjona voafetra nanolorana azy io.
Azontsika atao ny mampiasa na mampiharihary ny mombamomba anao araka ny heverinay fa ilaina amin'ny lalàna mifandraika; hamaly ny fangatahana ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana, ny governemanta ary ny mpanara-dalàna; hanaraka ny baikon'ny fitsarana, ny fomba fiasa amin'ny raharaham-pitsarana ary ny fizotrany hafa, hahazoana fanafody araka ny lalàna na hamerana ny fahavoazana azonay; ary mba hiarovana ny zon'ny, ny fiarovana, na ny fananan'ny mpiasanay, ianao na ny hafa.
Azontsika atao ny mamindra na mizara ny mombamomba anao manokana mifandraika amin'ny fampiraisana, fahazoana, na fifanakalozana na famindrana fananana hafa, miankina amin'ny fepetra takian'ny tsiambaratelo mifanaraka amin'izany, ary miaraka aminao amin'ny fampandrenesana raha takian'ny lalàna ianao.
Ny fiarovana ny mombamomba anao manokana dia zava-dehibe aminay. Izahay dia mandray fepetra fandaminana, ara-teknika ary ara-batana maromaro natao hiarovana ny Fampahalalana manokana angoninay. Na izany aza, ny risika fiarovana dia voajanahary amin'ny Internet sy ny teknolojia fampahalalana rehetra, ary tsy afaka miantoka ny fiarovana tanteraka ny mombamomba anao manokana izahay. Izahay dia hanaraka ny lalàna sy ny lalàna manan-kery izay mitaky ny hampandrenesinay anao raha sanatria ka iharan'ny fanelingelenana ny mombamomba anao noho ny fandikana ny fepetra fiarovana anay.
Izahay dia mitazona ny mombamomba anao manokana raha mbola ilaina izany mba hanatanterahana ny tombotsoanay mifanaraka amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity, ny polisim-pitanana ary ny lalàna mifandraika amin'izany.
Ho fampahalalana sy fahafaha-manao anao, ireo tranonkala ireo dia mety misy rohy mankamin'ny tranonkala fahatelo. Ireo vohikalan'ny antoko fahatelo ireo dia tsy eo ambany fifehezanay ary fehezin'ny politikany manokana sy ny fampiasana azy. Ho fanampin'izany, ny rohy avy amin'ny antoko fahatelo dia tsy manome soso-kevitra ny hifandraisany amin'ny, fanamafisana na fanohanananay ny iray amin'ireo tranonkala mifandray.
Fanarahana ny lalàna momba ny fiarovana ny fiainana manokana amin'ny Internet an'ny ankizy
Ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny zaza tsy ampy taona dia tena zava-dehibe. Noho izany antony izany dia tsy manangona vaovao tsy fantatra amin'ny tranokala amin'ireo fantatray izahay fa latsaky ny 16 taona. hamafana avy hatrany ny fampahalalana.
Mety misy dinika ao amin'ny tranonkalantsika izay, noho ny toetoetran'ny forum sy ny fahafahan'ny tranokalanay, dia misy ny fampitandremana fa ny fampahalalana niditra dia "fampahalalana ampahibemaso." Ny fampahalalana toy izany dia raisina amin'ny fomba hafa noho ny tanjon'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity toy ny fampahalalana hafa voalaza eto. Rehefa mampiasa ilay andiam-baovao ampahibemaso izahay dia midika fa mety ho hitan'ny besinimaro na tsia ny tranokalanay.
Amin'ny alàlan'ny fampidiranao ny mombamomba anao ao amin'ny sombin'ireo tranokalanay izay mampitandrina fa ny fampahalalana napetraka dia fampahalalana ampahibemaso, ekenao fa tsy manome toky izahay fa hijanona tsy miankina ireo fampahalalana ireo; Ankoatr'izay, ianao dia miaiky fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fampahafantarana ny mombamomba anao sy ny fiovana ara-dalàna mifandraika amin'izany izahay. Eny tokoa, satria tsy manome toky izahay fa hijanona ho tsy miankina ny fampahalalana toy izany, dia tokony antenainao fa ho hitan'ny olona rehetra, anisan'izany ireo olona tsy ao amin'ny tranonkalantsika.
Zon'olombelona Privacy California
Raha mipetraka any California ianao ary nanome fampahalalana azo fantarina manokana ho anao, dia azonao atao ny mangataka vaovao indray mandeha isaky ny kalandrie momba ny fampahafantaranay ireo sokajy sasany momba ny mombamomba anao manokana ho an'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjon'izy ireo mivarotra mivantana. Ny fangatahana toy izany dia tokony hatolotra an'i Tides amin'ny info@tides.org.
Fampahalalana ho an'ny mpampiasa ivelan'ny Etazonia
Ireo tranokala ireo dia navoaka tany Etazonia ary iharan'ny lalàna any Etazonia. Raha mponina na teratany Eoropeana ianao dia manana zo fanampiny mifandraika amin'ny mombamomba anao manokana mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fiarovana ny angona ankapobeny ("GDPR"), ao anatin'izany ny zony hangataka kopian'ny Fampahalalana Manokana anananao, sy ny manan-jo hangataka ny hanavaozinay, hamafana na hanafoanana izany fampahalalana izany. Raha manana fanontaniana na fangatahana manokana momba ny GDPR ianao, dia mifandraisa Tides amin'ny GDPR@tides.org.
Fiovana amin'ny politikantsika
Azontsika atao ny manitsy an'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manao izany isika dia hanova ny daty "Nohavaozina farany" eo an-tampon'ity pejy ity. Manentana anao izahay hijerena matetika foana mba hahitana vaovao momba ny fanovana ny Politikan'ny tsiambaratelo. Ny fampiasanao ireo tranokala aorian'ny namoahanay fanovana dia midika fa manaiky ireo fanovana ireo ianao.
Raha manana fanontaniana na hevitra momba an'ity Politika momba ny tsiambaratelo na zavatra mifandraika amin'ny tranokala ity ianao, dia mifandraisa Tides amin'ny info@tides.org. Ny fanontaniana sy fangatahana manokana momba ny GDPR dia alefa tsara indrindra GDPR@tides.org.